Atirishooyinka Bollywoodka Katirsan Oo Qaliin Wajiga Ah Mareen Quruxda U Jeedid Foolxuma Ka Horeysay (+Sawiro) – Filimside.net
Atirishooyinka Bollywoodka Katirsan Oo Qaliin Wajiga Ah Mareen Quruxda U Jeedid Foolxuma Ka Horeysay (+Sawiro)
Fadlan Hoos Kaga Bogo Maqaalka Qeybtiisa Kowaad Iyo Sawirada Aad Ku Kala Garan Karto:
Mid kamid ah dumarka dunida ugu quruxda badan dunida taariikh ahaan Priyanka Chopra, xidigtaan qaliin wajiga ah ayee martay laga soo bilaawo sanka ilaa bishimaha sida sawirka aad ka fahmi kartaan marki hore se ahed iyo hada side tahay.
Anushka Sharma Kohli:
Atirishada Filmka Rab Ne Bana Di Jodi, quruxdeda filmkaas aad ayee nooga yaabsatah balse maxaa ka dambeyay xidigtaan qaliin dhanka bishimaha ah sida sawirka aad ka fahmi kartaan.
Atirishadan waxay kujirtaa liiska xidigaha qaliinka dhanka wajiga ah mareen, waxayna qaliin kusameysay garkeeda, bishimaheda iyo qaab dhismeedka wajigedaba.
Qof walba ayaa garanaya Shruti Haasan waa atirisho caalami ah sido kalena kasoo shaqeysay aflaamta koonfur india iyo kuwa Bollywoodkaba waxaaana dhalaya Super Star Kamal Haasan
Xidigtaan sawirka ayaaba cadeen idiiin ah waxay qaliin kusameysay sankeeda xitaa sawirkeda hore marke yared la isma dhahaayo tani waa Shruti Haasan.
Power Star Sridevi waa mid kamid atirishooyinkii 80kii iyo 90kii ugu caansanaayen balse maanta aan dunida ku noolen xidigtaan asal ahaan waa reer koonfur India sidaa awged markee yared sankeed aad ayuu weynaa waxayna martay qaliin dhanka sanka ah ilaa ay marki dambe kamid noqotay gabdhaha ugu quruxda badan taarikhda fanka hindiya.
Shila Shetty quruxleyda Bollywoodka markee yared la isma dhahayo tani waa Shilpa oo yar maadama muuqaal ahaan kala duwan yihiin waxayna sameysay xidigtaan qaliin dhanka sanka ah filmka Baazigar na muuqaal cusub ayee la timid oo ay dadka quruxdeda qalbiga kaga xaday maadama yaraanteda sanked aad u weynaa.
Dadka waxay in badan is weydiyeen Bebo maxaa kudhacay muuqaalka wajigeda dambe maadama filmadii lagu yaqiinay sida K3G, Mujhse Dosti Karoge, Main Prem Ki Deewani Hoon wajiged iyo kan maanta farqi weyn u dhaxeya.
Ileen xidigtaan waxayba martay qalin dhanka wajiga ah sida sawirka idiin kaga muuqdo daamankeda aad ayee u bedeshay xidigtaan..